NextMapping | Ny Ho avy nozarina
Jason Campbell avy ao amin'ny MindValley nanadihady an'i Cheryl Cran momba ny 'fifehezan-tena' ilaina mba hamoronana hoavy.
Mba hihainoana ny feo feno amin'ity tafatafa ity dia mandehana Eto.
Jason: Manana Cheryl Cran eto aho, izay, Oh my gosh, hanana fikasana toy izany isika hiresaka momba ny ho avin'ny asa ary zaraina ny ho avy. Ny tiako holazaina dia nekena tamin'ny maha-influencer voalohany azy an'i Onalytica. Raha miresaka momba an'ity lohahevitra ity dia manao ahoana ny ho avin'ny asa? Izy dia mpitarika nitory tao amin'ireo fikambanana manerana an'izao tontolo izao. Moa ve nanoratra boky valo miaraka amin'ny toko fahasivy ho avy ary inona no horesahantsika amin'izao fotoana izao dia ny tena zava-misy, inona avy ireo fanovana izay hitantsika eny amin'ny toeram-piasana ankehitriny? Manao ahoana ny ho avy sy ny azontsika atao momba izany mba hitoerana maharitra sy mahomby. Cheryl, misaotra betsaka amin'ny fahatongavan'ny fampisehoana sy ny fandraisana.
Jason: Tiako ny handre hoe inona ny dianao amin'ny fidirana an'ity lafiny ity hanampiana ny olona handia ny fanovana ary ahoana no fomba nandehanananao namahana izany saha izany ary tena manampy ny orinasa hahalala izay tokony hatao?
Cheryl: Ka ny diako dia somary tsy manan-tsahala izay tsy nandehanako tany amin'ny oniversite na ny oniversite. Izay tena be dia be ny fironana ankehitriny!
Nanomboka tamin'ny sehatry ny lisea aho ary nanomboka tamin'ny banky. Tena nahomby aho. Nampianarina hiasa mafy aho, mazotoa miasa ary nandroso tamin'ny toerana mpitarika aho mbola tanora, 23 taona.
Ny fombako tokana amin'ny maha-mpitarika ahy dia ny fametrahana ny vina sy manentana ary manome aingam-panahy ny olona hiaraka amin'ny fanovana. Izany no fahaizako an-tanana hatramin'ny voalohany ary naka izany fahaiza-manao izany aho mandra-pialako ny banky ary nandeha aho ary niankohoka ary niditra fiantohana, nanangana sandratra mahomby izay nahomby, nanao fanabeazana matihanina ho an'ny mpivoatra sy ny realtors ary vondrona hafa. Ka ny fitenenana matihanina dia tafiditra ao anatin'ny làlam-traikitry ny asako ihany koa.
Nanoratra ny boky voalohany aho, “Lazao izay tianao holazaina - Ataovy izay lazainao”Tamin'ny 2001 ary io boky io dia mikasika ny fomba hametrahantsika ny hoavy tsy azo antoka ary inona ny fifandraisana ilaintsika hanaovana izany.
Ary avy eo ireo boky valo taty aoriana, ary nanao fanazaran-tena manokana tamin'ny orinasa mpanolo-tsaina nandritra ny 20 taona mahery izahay. Nanoratra ilay boky aho "NextMapping - Antsoy, Hizaha ary hamorona ny ho avin'ny asa" roa taona lasa izay ary talohan'izay "Ny zavakanton'ny fanovana - Fiovana fiovana ao anatin'ny tontolo misy haingam-pandeha". Ny fahaizako manokana ho mora tohina amin'ny fanovana mikorontana dia zavatra iray izay nahafahako nifindra tany amin'ireo mpanjifa izay iasantsika amin'ny paikady miasa ihany koa fa ao amin'ny ekipantsika ary miaraka amin'ireo olona izay manofana sy miresaka amin'ny.
Jason: Mivoatra haingana ve ny fiovana? Manova ny fomba fiasantsika ve ny teknolojia? Nahoana no sarotra ny fanovana?
Cheryl: Eny, heveriko fa fitambaran'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo izany. Peter Diamandis, mpiara-manorina ny oniversite tokana dia miresaka momba ny fiovan'ny fivoarana sy ny hafainganan'ny fanovana haingana. Ary izay no iainantsika ankehitriny. Niresaka momba ny fiovana nandritra ny am-polotaonany izahay, saingy hatramin'ny mandra-pahatongan'ny roa arivo ny fitantanana dia azo tanterahina. Andeha, hiresaka momba ny milina ATM isika. Izany fanovana izany dia fanovana mety nampifanetain'ny tsirairay haingana, haingana. Saingy rehefa manana an'arivony roa ianao ary ankehitriny dia manana fanavaozana fampivoarana mitranga isam-bolana izay mifandray amin'ny fiovan'ny teknolojia ary koa fiovana ara-tsosialy. Misokatra isan-karazany ny fisainan'ny olona. Societaly dia tiako holazaina izao fa miresaka zavatra tsy mbola noresahana tato anatin'ny folo taona lasa isika ary tena mijery ny fomba hanatsarana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanovana. Fa marina, ara-tsaina fanovana no zavatra sarotra indrindra ataon'ny olona. Mifindra avy amin'ny eritreritra 'ahy mankany' izahay izay takiana hamoronana hoavy zaraina.
Mora ny teknolojia. Miresaka momba ny CRM sy platform ianao, mora an'io ampahany io. Azonao atao tsara hoy ianao, ho voavaha teknolojia io olana io. Ny vahoaka no fanamby.
Izahay dia manombatombana ny maha-zava-dehibe ny fahazoana olona hividy amin'ny ho avy mba hahita ny fahatsaran'ny fiovana, hampifandray ny fiovana amin'ny dikany manokana ary hampifandray ny fiovana amin'ny ho fiantraikan'izy ireo. Manokana. Mino mafy aho ary matoky tanteraka fa raha tsy manana isika fanovana ny fomba fitarihana amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, hanohy ny fiverenan'ny olona izahay satria tsy matoky ny psikolojia ny fiovana raha tsy afaka mampifandray azy amin'ny dikany isika ary heveriko fa io làlana miampita io amin'izao fotoana izao.
Jason: Wow. Tiako ny handinika marina fa maro kokoa izany satria efa zatra nanadino ny fotoana nanandramana aho hanery ny fanavaozana ny teknolojia ao anaty orinasa iray ary hitako ny fomba nanohitra ny olon-drehetra hamely ahy sy ny zavatra maro horesahinao rehefa ianao miresaka momba ny fiandrasana fa ho avy ny asa no singa iray amin'ny fitondran'olombelona. Inona no tianao holazaina amin'ity hevitra ity? Mahatsiaro ho be dia be ny olona, ​​ary na dia ny tenako aza, tsy mino aho fa ny fanovana na ny haitao na inona na inona fiavian'ny tena dia hahamora ny fiainako. Io ve no tena misy manjo ny hantsana?
Cheryl: Ao amin'ny boky, "Ilay zavakanton'ny fanovana", Miresaka momba ny fihodinana fanovana sy ny fomba fihetsikay rehetra isika amin'ny fomba mitovy. Tsy maninona na iza na iza amintsika no nivoarana, rehefa nitranga ny fanovana, misy ny fihetsiky ny fanonganana voalohany, ny fihetsiky ny fiarovana, ary io fihetsika io dia tsy matoky ny fanovana aho. Tsy resy lahatra aho fa ho tsara kokoa noho ny fomba nahatanterahany ary tsy azoko antoka fa ho afaka hampiakatra azy amin'ny toerana ilako azy aho, mba hisian'ny fiantraikany bebe kokoa. Dingana ilaina io dingana io. Tena dingana fitsikerana izany. Na izany aza, maro ny olona no mifikitra amin'io dingana io satria lasa rendrika amin'ny zavatra tsy miasa izy ary ahoana no hatao hoe diso? Noho izany dia te-hikoritra ny rantsan-tànana sy ny lavaka amin'ny teknolojia izy ireo ary ny ho avy raha mifindra amin'ny sehatra manaraka, izany no antsoiko hoe famoronana famoronana, izay manomboka mijerena, tsara, ahoana raha, raha toa ka mifanerasera aminao i Jason aho manova, fa tsy ny manatona anao ka te hampientanentana rehetra ary lazainy fa hiova, azontsika ity CRM vaovao ity, mahafinaritra.
Hanamora kokoa ny zava-drehetra ho anao izany. Ny fisehoan-kevitrao voalohany dia mandeha amin'ny fisalasalana. Ianao dia hieritreritra hoe amidiko anao daholo ny entana mavesatra rehetra fantatrao inona? Tsy hatoky ahy ianao na ny teknolojia satria miezaka ny hivarotra izany aminao aho. Ary rehefa miresaka momba ny dikany aho, dia ny fampitana azy io amin'ny dikany ho an'i Jason sy ny asany. Raha hijery izany amin'ny alàlan'ny fakantsary izay zaraina ny ho avy. Ka raha izany aza, raha manatona anao aho ary milaza, efa nitady CRM marobe izahay, dia maniry ny fampidiranao azy ireo izahay. Lazainay aminao hoe ahoana ny hanovana ny tsy andavanandro? Inona avy ireo fanontaniana mipoitra aminao rehefa mahita ireo teknolojia mety hitranga ianao ary inona no eritreretinao hatao hanamora ny asanao amin'ny fiainana raha tokony hampiasa ireo programa CRM vaovao ianao? Ao amin'ny NextMapping dia miresaka momba ny modely PREDICT isika. Ary ny iray amin'ireo singa manan-danja amin'ny fanaovana an'ity fanovana rehetra ity dia ny fitomboan'ny vahoaka. Ary tsy resaka momba ny fanadihadiana mahazatra na mpiasa amin'ny fanadihadiana ihany no resahiko, miresaka momba ny resaka mahaliana amin'ny olona iray aho, miaraka amin'ny olona, ​​amin'ny maha-olombelona, ​​inona no dikan'izany aminao? Ahoana no ahitanao azy io sy ny fomba ahafahantsika mamorona atidoha amin'ny fomba famoronana izany mba hiasa ho anao sy ho an'ny olon-drehetra amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Jason: Cheryl, tokony efa nifampiresaka tamin'ny fiandohan'ny asako aho! Ankehitriny rehefa miteny izany ianao dia mieritreritra ireo fotoana rehetra ireo dia nikapoka ny amponga aho nanao izany tsara ary firy ny fanoherana, ohatrinona ny niadiko tamin'ny ady miha-maika rehefa niezaka ny hitondra ireo fanavaozana ireo aho, ireo fitaovana ireo satria Tena faly aho tamin'io. Ary maminavina? Fantatra amin'ny maha-mpivarotra ahy ao an-tsaha i Valley ary tonga amin'ny fisalasalana foana ny olon-drehetra.
Ka tiako ny manitatra bebe kokoa momba ity modely PREDICT ity mba ahafahantsika ho tsara kokoa amin'ny famoahana fanavaozana sy teknolojia vaovao ary mba hahomby kokoa eo amin'ny toeram-piasana. Ary betsaka amin'ireo zavatra ireo no manodidina an'i AI, izay horesahantsika kely aorian'izay, fa aleo aloha handrava ity modely PREDICT ity isika mba hanampy anay na hanampy ahy fotsiny amin'izao fotoana izao.
Cheryl: The milaza Ny modely dia fitaovana ilaina hanampiana ny hamina mialoha ny ho avy ary hitady ny modely aloha isika, izay modely P an'ny FANDROSOANA. Ny modely dia manana singa fito. Hiresaka momba ny antony roa voalohany ahafahantsika manao podcast roa ora amin'ny modelin'ny PREDICT ihany. Hiresaka afa-tsy ny P sy ny R isika, ny pattern dia P ho ohatra.
Ny an'ny R hanekena. Raha ny tenantsika ho tompon'ny orinasa na izay mihaino amin'ny maha-olon-tokana antsika, raha te-hitady fitokisana amin'ny ho avy ianao dia tsy maintsy mijery ireo modely, mila mijery ireo lamina avy amin'ny fomba fijery isan-karazany. Iray amin'ireo ho avy amin'ny fahaiza-manao asa izay mila ataontsika rehetra amin'ny ambaratonga avo kokoa ny fahaizana manana fomba fijery marobe.
Ka mijery ireo fomba fijery marobe ireo ianao avy eo dia mijery ireo modely nipoitra avy amin'ireo fomba fijery rehetra ireo. Ohatra, raha tokony hijery orinasa iray entin'ny mpivarotra isika, mazava ho azy fa hanangona izany data izany izahay avy amin'ny fomba fijery, fa hitady ireo modely mifandraika amin'ny fandidiana, ny kaonty ary ny mpanjifa isika. Ary izay no misy ny volamena satria izay no manondro antsika amin'ny ho avy satria izao isika afaka mandeha, Oh miandrasa faharoa. Ka ny fivarotana dia milaza fa ny olona dia te hanao fanompoana bebe kokoa. Ny fandefasana an-tserasera dia milaza fa tsy manana ny teknolojia ahafahan'ny olona manompo tena amin'ny haavo ny lazan'ny varotra fa mila ary ny kaonty milaza fa be dia be ny vola hanaovana izany. Ka na inona na inona fomba fijery izany dia atambatra ao daholo isika ary mahita ny marimaritra iraisana amin'ny alàlan'ny fanekena. Ary raha ny marimaritra iraisana dia afaka mamonjy vola ho an'ny kaonty isika raha toa ka mampihatra izany amin'ny fomba iray, afaka manampy ny marketing amin'ny fanaovana asa tsaratsara kokoa isika izao satria fantatsika tsara ny zavatra tian'ny mpanjifa hanaovana fanompoana samirery. Afaka manampy ny fandidiana isika hisafidy ny vahaolana teknolojia mety homena ireo modely izay fantatsika.
Jason: Te hiresaka zavatra bebe kokoa momba ireo fironana izay hitantsika isika izao. Aleo atombohy amin'ny alohan'ny teknolojia izany satria mieritreritra aho fa ny teknolojia dia zavatra tena manentana ny olona maniry ny hahazo ny tanany. Ka inona izany fironana lehibe izany? Nosoratanao ny fisokatra misokatra. Niresaka be dia be izahay ary mazava ho azy fa teo am-pivarotana mivarotra, faly aho rehefa miresaka momba ireo rafitra sy CRM. Inona ireo zavatra lehibe hitantsika izay mety hisy fiantraikany amin'ny maha-olona antsika any amin'ny toeram-piasana?
Cheryl: Faly aho fa nanomboka ny resadresaka niresaka tamin'ny olona aloha izahay satria amin'ny NextMapping no fanalahidy eto dia tsy maintsy mijery isika, mazava ho azy, faly amin'ny teknolojia isika rehetra satria misy fiatraikany amin'ny fiainantsika andavanandro. Samy mampiasa Siri sy Alexa daholo isika rehetra, mampiasa mavitrika feo daholo isika, mampiasa teknolojia mampihetsi-po daholo isika. Izahay rehetra dia mampiasa fankatoavana tarehy fotsiny, noho izany dia faly isika, saingy mahatsapa fatratra tokoa aho fa mila mijery ny teknolojia miaraka amin'ny olona aloha. Tokony hanomboka amin'ny fanontaniana isika:
Ahoana ny fiantraikan'izany amin'ny traikefan'ny mpanjifa? Ahoana no fiantraikan'izany amin'ny traikefan'ny mpiasa? Ahoana ny fanampiana ny olombelona iray manontolo? Ary ataoko fa raha manana ireo fanontaniana ireo isika amin'ny laharana, dia ho lasa tsara amin'ny fivoarana ara-teknolojika rehetra atrehantsika isika. Azo alaina ao amin'ny tranokalanay izany antsoina hoe tenda 20 ambony indrindra ho an'ny 2020
Be dia be isika mahita. Ny isa voalohany, ny fampidirana ny dimy G dimy G dia ho lasa be fahatany ary midika izany fa izao isika dia tokony hanana fampiharana ambony kokoa noho ny famporisihana ny feo, ny fanekena ny tarehy. Amin'ireo teknolojia rehetra ireo izay vao manomboka an-tànana. Hanohy ny fivoarana sy hanova ny zavatra ho an'ny ho avy ny fring AI, ary hampitombo ny zava-misy izay zaraina ny ho avy. AI dia hanohy ny hamindra ny fomba fanaovanay orinasa, ka tsy handray asa izy ireo. Mandray ireo asa hataon'ny olona amin'ny ambaratonga famerimberenana izany. Ka rehefa mijery ny firosoan'ny AI isika, ny fironana hafa hitantsika dia ny automation, fikambanan'ny robotika izay mavesatra amin'ny famokarana, kobika bebe kokoa, botsika fikarakarana bebe kokoa amin'ny indostrian'ny fahasalamana, exoskeleton bebe kokoa hanampiana ny olona hampiakatra zavatra amin'ny 10 fotoana mahery an'ny lahy. Betsaka ny fanavaozana be. Raha ny marina dia faly aho, raha ny marina dia eo am-povoan'ireo aretina marobe ankehitriny izay voavaha ao anatin'ny taona vitsivitsy amin'ny alàlan'ny teknolojia. Izahay dia eo an-tsaha hamaha zavatra toy ny aretin-tsaina amin'ny alàlan'ny fitsaboana cRitiveitive VR. Ny fitsaboana ny zavamiaina ara-batana dia fotoana mampientam-po ho velona ary noho izany ireo teknolojia ireo dia hanova ny planeta.
Manana olona 8 miliara eto ambonin'ny planeta isika. Ny antsasak'izy ireo dia mifandray amin'ny WIFI. Amin'izao fotoana izao ao anatin'ny telo taona ho avy, ny 75% amin'ny planeta dia hanana fifandraisana WIFI. Ka raha mieritreritra ianao fa efa manana fanavaozana isika izao dia ampitomboina izany amin'ny 30% amin'ny mponina. Ankehitriny manampy amin'ny loharano misokatra, manampy amin'ny angon-drakitra, manampy amin'ny fahendrena kolontsaina izay angoninay amin'ny alàlan'ny teknolojia. Na afaka manana eritreritra roa momba ny ho avy ianao.
Ny fanehoan-kevitra isa voalohany dia tena matahotra. Na ny laharana roa, dia miha-faly sy manafintohina ary mijery ny mety ho azontsika atao ny manova ny planeta ara-bakiteny. Ary tsy lazaiko fa avy amin'ny fomba fijery mirindra. Hoy aho hoe tena zava-dehibe ho antsika ny namorona ny planeta. Mamaha olana momba ny tontolo iainana izy ireo. Fantatrao, fa manana Greta Thunberg miresaka momba ny tontolo iainana isika. Misy ny vahaolana. Misy vokatra amin'izao fotoana izao izay noforonina izay miaraka amin'ny rano indray mitete kely, ny plastika dia azo ampidinina hatramin'ny 10 noho ny habeny tany am-boalohany. Betsaka ny fanavaozana ka maheno ireo zavatra ratsy rehetra ao amin'ny media. Tsy henointsika ny momba ny fanavaozana izay hamaky ireo fanamby misy ankehitriny, zavatra taloha ary noho izany dia tena mampientam-po tokoa ny fiainana.
Jason: Cheryl, tiako fa afaka nizara hevitra kely momba ny zavatra ho avy ianao. Mientanentana tokoa ary tiako ny fahatokisanao azy, tiako aho hahatsiaro ho mahazo aina ny olona amin'ny fahafantarana fa ho avy ity ho avy ary inona no dikany ho azy ireo sy ny andraikiny satria misy io hevitra io raha ny hevitro, toy ny hoe, wow, izao fanovana rehetra izao dia mitranga. Inona no anjara ataoko? Ahoana no ahafahako mijanona ho manan-danja amin'ity tontolon'ny fanovana ity Tahaka ny zava-misy eto amiko, efa sahirana amin'ny zavatra tsotra fotsiny aho toy ny fanavaozana amin'ny teknolojia automatiora tsotra, fa ny zavatra niresahanao fotsiny dia fomba mihoatra ny azon'ny ankamaroan'ny olona ao an-tsaina. Ahoana no fomba hidirantsika io be dia be io ary ahoana no handraisantsika anjara amin'izany?
Cheryl: Eto dia avo be ny finoako ny zanak'olombelona. Tena mino be aho fa hamaha ny olana maro. Araky ny nolazaiko teo aloha dia be dia be ny fanontaniana napetrako anontanio ao amin'ny workbook "NextMapping" manodidina, manana eritreritra ve mampatahotra anao ianao sa manana foto-pisainana maro be momba ny hoavy? Fa mieritreritra fotsiny aho avy eo, inona ny fomba fijery manaraka, tena mijery hoe aiza ny misy anao izao. Ka raha matahotra ny teknolojia ohatra ianao, na mahatsapa tahotra ny lalana hidiran'ny fiarahamonina, heveriko fa fotoana iray iainantsika hivoatra tokoa amin'ny tena fototr'izany. Mino aho fa eo amin'ny fivoarana miandalana isika eto ary raha mijery ny fiovana ianao dia afaka mijery izany satria matahotra aho, tsy fantatro ny dikan'izany. Afaka mijery toy mampientam-po ianao ary ho avy ny ho avy. nozaraina.
Tsy maninona raha handeha any. Izay no voalohany amin'ny fanovana dia ny fahatsiarovako tsy matahotra ary tsy fantatro ny dikan'izany, fa ny dingana faharoa dia ny fanekena izany ary avy eo milaza hoe, inona no azoko atao mba hanovako ny fanovana? Ohatra, raha mandroso mankany amin'ny fiaraha-monina demokratika miharihary ny fiaraha-monina dia manana fahafahana hiteny isika hoe: maninona?
Moa ve mifikitra amin'ny toeran'ny fahefana aho? Mikatona ahy ve ny egoako ary mino fa raha mbola mihazona hery aho dia mandresy?
Nizara ny hoavy, miara-miasa ny ho avy, miaraka ny ho avy. Ary ny fomba tokana ho vonona amin'izany fotoana izany dia ny fijerena fiovana ho famantarana ho antsika hivoatra. Ary misy lalindalina bebe kokoa ao, arak'izay fantatrao ao amin'ny MindValley no antony mahatonga anao manelingelina. Betsaka ny halaliny na rahoviana misy fiovana mitranga na amin'ny fotoana hitranga ny fikorontanana, antso ho antsika, fotoana ahafahantsika mandeha, ahoana no ahafahako mijery izany famoronana izany?
Ahoana no ahafahako mampifanaraka ny saiko mba tsy handrisihako an'io fanovana io fa tena hitako ny mety hisian'ny fiovana?
Ary averiko indray ny loharanom-bolako, fantatrao fa, "The Art of Change Leadership" dia miresaka momba izany aho. Ahoana no fomba hanaovantsika ireo fanovana ireo amin'ny manaraka?
Ary amin'ny NextMapping dia manome ireo modely ireo izahay hanampy ny olona hanao ireo fanovana ireo.
Jason: Zavatra iray izay heveriko fa maniry mafy ny rehetra isika saingy mazava ho azy, indraindray miatrika ny ady ego maty izay tsy maintsy lalovantsika ary tiako ny asan'ny asa sy ny zavatra lazainao momba ny teknolojia fa mahafinaritra nefa araka ny efa nolazainao fa tena ny fitondran-tenantsika olombelona hifanaraka amin'izany ary tena te hahita aho raha manana fitaovana hafa azontsika omena ho an'ny olona rehetra izay mihaino, iza no ao amin'ny toerana mpitarika ary mety mifandraika amin'ny olona ao anatin'ny ekipany izay tena manana an'io karazan-tsaina ratsy sy ny fomba handraisanao azy ireo ho vonona tsara amin'ny fanovana eo amin'ny toeram-piasana. Indrindra raha mikasika zavatra izay mety hampitsahatra ny filàna toerana manokana any amina toeram-piasana tahaka izany. Toa sarotra ny mivezivezy. Inona no hitanao na miandry anao?
Cheryl: Niara-niasa tamina vondrona ara-pahasalamana tany Etazonia aho ary nandamina famandrihana faobe. Ka izy ireo dia nividy otrik'aina iray hafa, izay midika fa 10 ny mpitarika tao amin'ny efitran'ny 30 izay fao hanamora ny fanitarana aho. Tsy nisy andraikitra azo antoka ho azy ireo. Tsy nisy fetra voafaritry ny ho avy na ny toeran'ny karama na ny drafitry ny fifandimbiasana.
Ankehitriny, ho an'izay mihaino, ny vaovao tsara ankehitriny, izay rehetra nivezivezy be dia manana fahafahana satria tsy maintsy ho mpiasa tsy ampy 85 tapitrisa ny olona any Amerika Avaratra mandrapahatongan'ny taona 2030 ka raha maharitra ianao ary mahay mampifanaraka, dia hanana fahafahana hanao asa ianao. Izay no zavamisy ankehitriny. Tamin'izany, 15 taona lasa izay dia tsy nitovy.
Ny nataonay dia nanamora ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo mpitarika 30 manodidina ny latabatra aho ary niteny hoe: “Ity no zava-misy. Ity ny marina. Efa ao anatin'ny toe-javatra lehibe fananganana isika. 10 olona ao amin'ity efitrano ity no tsy ho eo amin'ny toerany na ny andraikiny. Tsy haintsika hoe inona no miseho ary tsy fantatsika hoe aiza no ho avy, fa eto ny fantatsika dia ny tsy maintsy hitranga amin'ny fahombiazan'ny orinasam-pitantanana misy, koa ny fahamarinana dia mandresy foana ary avy eo inona ny fanampiana anay. Izahay dia hanome anao ireo modely, fitaovana, mpanazatra, fanohanana, loharano izay raha toa ianao ka mijanona, ianao dia mahazo fitaovana ho an'ny loharano sy ho avy, iny lalana tena sarotra alohan'ny hiara-miasa amin'ny ity fahazoana iraisana vaovao ity. Ary ho an'ireo izay avelanay dia raiso ho toy ny fotoana iray. Hiala miaraka amin'ny fonosana iray ianao. Afaka hamerina manoratra ny fiainanao ianao. Ho afaka hamindra ny fiainanao indray ianao. Mety hanana fotoana hiverenanao indray ianao amin'ny fifanarahana. Andao hojerentsika ny fomba anananareo tsirairay avy, ny fomba ahafahanay manampy azy, manampy anao, manome loharano anao ary manohana anao hamorona ny hoavinao tena tsara indrindra. "
Ankehitriny, mirehareha ny milaza aminao aho fa arak'izany, ny olona 10 izay mahazo ny lohany dia manampy azy ireo hahita ny ho avy manaraka. Nanohana azy ireo ny mpitarika, nanohana azy ireo ary nitarika azy ary ireo olona 10 ireo namoaka hetsika dia nilaza zavatra tsara indrindra izay niseho tamiko. Nianatra ny fomba fitetezana fiovana aho. Nianarako ny fomba hiatrehana ny hoavy tsy fantatra ary izay niafarako dia sambatra kokoa noho ny teo aloha aho, ka tsy te-hanaitaitra ny fanaintainan'ny fiovana aho.
Ho an'ny mpitarika mihaino dia mila vonona ny hipetraka miaraka amin'ny olona tsy tapaka ianao ary mahita azy ireo ho olona, ​​maso maso, mihaino izay atahorany. Aza sorohina ny fanaintainana. Aza manondro azy ireo amin'ny vahaolana vitsivitsy. Ampio izy ireo hivelatra amin'ny modely.
Ampio ny olona hanao io fanovana io. Mampiasa ny maodelin'ny mpitarika fiovantsika izahay ary milaza, aiza ianao no tena miova amin'izao fotoana izao? Ahoana no fomba ahitanay anao hamoronana vahaolana?
Tsy afaka hilaza amin'ny olona tsy mety ianao ary mila miova. Tsy afaka hiteny amin'ny olona fotsiny ianao, minono azy, butterbing. Mifindra isika ary miova. Tsy afaka milaza fotsiny ny olona hiova na ho faty ianao. Mila miahy ny fahombiazan'ny olona ianao ary amin'ny maha-mpitarika anao dia tokony ho vonona hanakodia ny volon-tànanao ianao ary hidina sy maloto ary hanana ireo resaka saro-bidy be sy saro-pantarina toa marina tokoa satria azonao atao ny manome fahalalana izay mamela anao. zarao sy tariho ny olona hoe aiza ho aiza no hahasoa azy ireo, ampio izy ireo hahita ny fomba hanampiany azy ireo dia ho afaka ianao. Ampio izy ireo hahita fa zaraina ny ho avy.
Jason: Antenaiko fa ireo mpitondra rehetra nihaino an'ity dia tena nandray an-tsaina izany. Nahita ny zavatra maro azo atao ianao mba hampandehanana tsara ity ary tiako fa ny fototry ny rehetra dia miorina amin'ny fahamarinana . Ny tiako lazaina dia ny tena mila mivoaka mba ahafahanao manana ireo fifampiresahana am-pahatsorana ireo ary ny hanitarana izany ary rehefa nihaino izany aho dia nahatsapa ho toy izany matetika fa zavatra mila ampiharina ianao rehefa tonga fitarihan-tena, toy ny ataonao mahatoky amin'ny tenanao. Azonao atao ve ny milaza anay bebe kokoa momba izany? Amin'ny fomba ahoana no andraikako anjara sy ahitako ny firongatry ny toerana nitondrako ny anjara asako, ny fahaizako manokana ary ny fahaizako manokana? Ahoana no ahitako ny fitarihan-tena, ny fahatokisan-tena hahitana hoe aiza no ahazoako misintona ary mety misy ve ny tendrony iray amin'ireo fahaiza-manao tokony hananako fiofanana bebe kokoa?
Cheryl: Ny fitarihan-tena mazava tsara, dia mitandrina ny herinao. Raha fantatro fa be loatra ny asako any aoriana, dia mihetsika ny laharana iray izay hataoko araka ny ambaran'i Maslow ary izany dia ny fiezahana hiaro ny tenako.
Ary izany no ahitantsika ny CYA be dia be amin'ny fikambanana ary mahita CYA be dia be izahay manarona ny ** anao. Ary ny antony hitantsika fa ny olona dia mandeha ho azy ny valin'ny tahotra.
Toy izany, tsy te-handray an'ity fanovana ity aho satria midika izany fa mety tsy hanana asa aho. Ny tiako lazaina dia hoe mpanazatra, koa andeha isika hankany. Ahoana raha, inona no fahaiza-manao anananao? Inona no laninao entinao? Ahoana no ataonao manova ny fiainan'ny olona? Ahoana no ahafahanao manampy ny lanjan'ny fikambanana? Satria raha toa ka maniry vadinao ara-bakiteny ny hanome lanja ary mitady foana ianao hanampy ny olon-kafa hahomby, dia niantoka antoka ny fiorenan'ny asa ianao amin'ny hoavy, tsy misy fanontaniana.
Ny fitarihan-tena dia avy amin'ny fiheveran-tena. Mino ve ianao fa manana vidiny?
Mino ve ianao fa mendrika hamorona lanja ho an'ny olon-kafa amin'ny ho avy?
Mino ve ianao fa zaraina ny ho avy?
Ary raha manana izany fahatokisan-tena izany ianao, dia ho tia anao bebe kokoa noho ny teo aloha ny ekipanao satria hitany fa tsy miezaka miaro ny tenanao ianao. Ianao dia mifantoka kokoa amin'ny azy ireo sy ny fahombiazany noho ny fiarovana ny fahaizanao amin'ny hoavy ary raha mamindra ny fomba fijerinao ianao dia tsy dia misy dikany loatra, Oh my gosh, hivoaka ny asa aho ary bebe kokoa momba izay atao Fantatro fa marina ny zavatra ataoko mba hampisy lanja. Ary ho ahy izany, ho an'ny olona rehetra izay mihaino tena manaiky an'io hevitra io amin'ny ambaratonga manaraka dia ho hitanao fa tsy misy zavatra tokony hatahorany.
Amin'ny fanamarihana manokana, efa mpandraharaha nandritra ny 20 taona mahery aho. Isan-kerinandro dia tsy azo antoka. Tsy fantatro hoe avy aiza ny mpanjifa manaraka. Tsy fantatro hoe avy aiza ny vola manaraka. Izay no zava-misy ahy nandritra ny 20 taona. Mino aho fa mila mamolavola fomba fisainana mpandraharaha ny rehetra fa tsy amin'ity eritreritra ity izay efa azontsika tato anatin'ny folo taona farany izay karama azo antoka, izay karetsaka volamena.
Tena misy izany. Izy io dia manakana antsika tsy hieritreritra mihoatra noho ny fika mampivadika ary olona maro no efa nomanina hino fa izy ireo dia tsara tahaka ny maha-identité ny asany izay tadiaviny ary mila miova. Mila mihetsika ny mombamomba antsika, mihoatra noho izany aza isika. Manome lanja bebe kokoa noho izany isika ary raha tsy mino ianao, dia ny fampivoarana ny asa ataontsika amin'ny tenantsika dia manodidina ny fampandrosoana azy.
Jason: Whew. Mitory amin'ny amboara ianao ary tonga any an-trano. Mamarana ity andiany ity isika, miresaka momba izany ary mety ho zavatra iray hafa tiako ho tanterahina alohan'ny handraisantsika azy ity dia rehefa mamily ny asako isan'andro aho, ahoana no ahaizako mijanona eo ambony mahita hoe inona no fironana ho vokatr'izany? izaho ny haingana indrindra? Toy ny ahoana no hitahako radara hahafantatra ny tokony hotadiaviko?
Cheryl: Amin'ny NextMapping dia isika rehetra - "Inona no ho avy?" Tena azo tanterahina izany fanontaniana izany satria tsy manahy ny ho avy tsy ho ela isika. Ka izay lazaiko aminao dia ny fitadiavana ireo fironana ireo dia tena mifantoka amin'ny fifantohana amin'ireo izay manohina anao manokana amin'ny ho avy sy ny fanirianao ary ny filanao ary ny tianao hatao. Ary araho maso foana izany. Fantatrao fa ity dia asanay. Ka amiko dia tiako foana ireo futuriste hafa. Inona no lazain'izy ireo? Manao inona ry zareo? Voazatra amin'ny teknolojia aho. Inona no fironana mihatra amin'ny teknolojia sy ahoana ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina?
Heveriko fa ny fanao satroka futuriste mandritra ny asanao ankehitriny dia zavatra iray azonao atombokanao ankehitriny fa tsy matahotra. Betsaka ny olona manana loha ao amin'ny fasika. Tsy te hahalala hoe manova ny toe-javatra na izay mitranga. Hoy aho, aza manao izany. Atsangano ny lohanao. Tandremo, satria eo no misy ny fotoana hisehoana ireo.
Ary amin'ny alàlan'ny dia ity no nananganana ny mpanorina ny Uber sy ny mpanorina ny Airbnb, nanangana ny lohan'izy ireo izy ireo ary nahita fa zaraina ny ho avy ary hoy izy, izany no alehan'ny fiarahamonina. Tian'ny olona ny fiara raha mitaky. Tian'izy ireo ny hahita hoe iza no handeha hitondra azy ireo. Te hahafahan'izy ireo mitety an'izao tontolo izao ary mampiasa trano fonenan'olona. Ka raha manainga ny lohantsika avy any anaty fasika isika dia hahita fotoana. Tsy misy tokony hatahotra. Ny hany tsy tokony hatahorantsika dia ny fanimban-tena.
Napetrakay teo amin'ny làlan-kianjantsika manokana izahay - ny faran'ny fijanonanay ary ny ahy, izany no tiako hatahorako, aiza aho no hijanona? Aiza refa manena ny mety ho vitako? Aiza aho no ajanony ny fotoana? Satria raha tsy mijery ny ho avy aho, dia midika izany fa te-miaina anaty banga aho. Mipetraka amin'ny fandavana aho. Mialana amin'ny fanalavirana ary efa imbetsaka aho no nandà ny renirano. Jason, tsy mahafinaritra. Nandany fotoana be ianao amin'ny fandavana. Ny fanontaniana tsara indrindra ho an'ny tenako dia hoe: "Ahoana no ahafahako ho vady tsara indrindra, reny tsara indrindra, renibeny tsara indrindra, namana tsara indrindra, fanomezana tsara indrindra ho an'ny mpanjifako?" Tiako fotsiny izao, ary izao no mitondra ranomaso. Tiako ny ho olona tsara indrindra izay azoko atao ary raha mbola izany no tanjoko, dia manana tahotra ny ho avy aho. Ny tahotra Zero.
Jason: Cheryl, misaotra betsaka fa nandany fotoana taminay taminay ary nizara ireo fomba rehetra mahatalanjona ireo. Mino aho fa ny tsirairay dia handao eto miaraka amina eritreritra hafa samy hafa momba ny fomba hiatrehana ny ho avy izay ho avy haingana sy haingana kokoa.